Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Alemanina Leroy Sane ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Bacon'. Ny tantaram-pitiavan'i Leroy Sane tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny zava-misy marina momba ny tantaram-pahibemaso dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mihevitra ny tantaram-pahaizana Leroy Sane izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Voalohandohan'ny fiainana
Leroy Aziz Sané dia teraka tamin'ny 11th of January 1996 tany Essen, Alemaina tamin'ny Souleyman Sané (ray) ary Regina Weber (reny).
Mpifindra monina ny ray aman-dreniny. Nifindra nankany Alemaina ny rainy avy any Senegaly noho ny antony ara-baolina. Manana an'i Frantsa i Regina Weber mamanay. Nanorim-ponenana tany Alemaina izy taorian'ny nanomezana fahafahana ho an'ny gymnastics.
Rehefa miaraka mitondra ny mpilalao baolina kitra sy ny gymnastics dia mazava fa ny génétika dia afaka mamokatra zavatra manokana. Ny vokatra farany dia ilay mahagaga, izany hoe; Leroy Sane. Izy no nandova ny fandanjalanjany tamin'i Mum ary haingana tamin'ny dadany. Ho an'ny maro, Tena marina tokoa fa manana atleta roa matihanina ho an'ny ray aman-dreny.
Sane nandritra ny fahazazany dia tsy te ho mpilalao baolina mihitsy. Ao amin'ny teniny, "Tsy te ho mpilalao baolina mihitsy aho. Nieritreritra ny ho lasa mpanamory sambon-danitra aho saingy tsapako tatỳ aoriana fa tsy antsoiko izany. Raha izaho no 16 na 17, tsy nandeha tany amin'ny antoko aho. Faly fotsiny aho - ilay baolina. "
Ao amin'ny resadresaka amin'ireo izay mahafantatra an'i Sane no tsara indrindra, nisy sary iray niseho tamin'ny fianakaviana talenta tsy dia fahita firy. Nentina tany amin'ny distrikan'i Wattenscheid i Sane, tao anatin'ny foibe indostrian'ny Lohataona Ruhr.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Manomboka amin'ny asa aman-draharaha
Leroy Sane no diamondra farany natokana ho an'ny famokarana Schalke izay namokatra Neuer, Ozil ary Benedikt Howedes tato ho ato. Ny asanao dia nanomboka tamin'ny SG Wattenscheid 09 - ekipa baolina kitra any an-toerana - tamin'ny faha dimy taonany. Mbola manan-danja ny rainy i Leroy noho ny fametrahana ny fototry ny asany. Anisan'izany ny zokiny lahy, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Leroy Sane tantaram-pitiavana - zava-misy tsy fantatra
Hoy i Leroy, hoy izy: "Be dia be aho no niaraka tamin'ny dadako fony aho mbola kely. Izaho sy ny rahalahiko dia niteny taminy foana 'Andao hiaraka aminay!' ary isaky ny mandeha miditra amin'ny tanjona izy ary haka sary azy. Lasa mpanazatra anay manokana izy tatỳ aoriana. Ny dadanay dia mpanolotsaina toy ny hita tamin'ny fahazaran-dresany. "
Leroy Sane Childhood Story- Ahoana no nampiofanan'ny rainy azy?
Tamin'ny valo amby valopolo taona dia niala tao Wattenscheid i Leroy tanora ho an'i Schalke. 'Amin'izany vanim-potoana izany, manana tongotra malaza izy,' hoy Ruhnert, mpanazatra ny tanora.
Na dia niaraka tamin'i Schalke tao amin'ny 2005 aza izy dia nandany telo taona nilalao baolina kitra niaraka tamin'i Bayer Leverkusen talohan'ny niverenany tany Schalke tao amin'ny 2011. Nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany nataony tamin'i Schalke izy tamin'ny Martsa 2014. Izy no nanao ny laharam-panjakan'ny Bundesliga iray volana taty aoriana nanohitra an'i VfB Stuttgart. Sane koa dia nanao ny laharam-pahamehana ho an'i Alemana Under-21s hanohitra an'i Danemark tamin'ny Septambra 2015. Ny fahombiazany tany Schalke dia nitarika ny famerenana ny tanàna. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakaviana Leroy Sane Ny fiainan'ny olona dia mpilalao baolina kitra be fitiavana. Fianakaviana tena matihanina izy io. Ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena ao amin'ny fianakaviana dia hitan'ny rehetra hita ao amin'ny sary ao amin'ny fianakaviana etsy ambany.
Fiainam-pianakavian'i Leroy Sane - Tantara tsy nambara
RAY: Ny sipan'i Leroy, Souleymane Sane, dia Starliga Star ary Senegal iraisam-pirenena. Nandany ny ampahany tamin'ny asany tamin'ny lalao baolina kitra alemà niaraka tamin'ny FC Nurnberg sy SG Wattenscheid. Mpilalao baolina matanjaka sy haingana izy nandritra ny androny. Fantany fa nihazakazaka 100m izy tamin'ny baolina tao anatin'ny segondra 10.7 nandritra ny fotoanany. "Samy" satria izy no lazaina fa nahita ny fahitalavitra 51 tao amin'ny fandresena 174 Bundesliga, ary nahatonga ny 65 amin'ny endrika 152 tao amin'ny laharana faharoa.
Rehefa nitsidika an'i Souleymane ny rainy dia nijaly noho ny fanararaotana fanavakavahana ratsy indrindra izy. Raha toa ka nilalao tany Hamburg na Frankfur izahay, dia nisy akondro nipoitra teo amin'ny tara-masoandro, ny fihetsiketsehana monkey ary ny "ooh-ooh-aah-aahs" izay voatondro teo aminy. Tsy nanatrika ny mpankafy velively i Souleymane ary tena nandeferana. Nataony teo amin'ny lampihazo ny resany. Tsy dia kely loatra ny Federasiona tamin'io fotoana io, zava-baovao ny fifindra-monina. Tsy ho avela hitranga amin'izao andro izao izany, ary amin'ny fomba feno fankasitrahana, ireo zatovolahy dia tsy nanana olana mihitsy.
Souleymane dia mpisolovava iray izay nanohitra tamin'ny fomba tsy mahery vaika tamin'ny fampiasana ny fampitam-baovao mba hampiroborobo ny fandriam-pahalemana na dia manararaotra mandrakariva ireo mpanohana mpanavakavaka aza.
Izy no no fotsy maintim-piaviana malaza any Alemaina football nandritra ny fotoanany. Niantso azy ho mpanao baolina kitra malaza indrindra ny mpanavakavaka alemana.
Nanjary tia azy i Regina Weber noho ny fampahalalam-baovao azy. Ny fanambadian'izy ireo dia mandefa onjam-pifaliana ho an'ireo mpanohana mpanavakavaka izay tsy mino mihitsy fa ny vehivavy atleta vehivavy malaza indrindra dia ho tia azy.
Ny ray aman-drenin'i Leroy Sane - Souleymane sy Regina
Samy nilaza fa samy manana ny heriny izy ireo.
rENY: Ny reniny, Regina Weber dia medaly-n'Ambohimanga 1984 olympika amin'ny gymnastique. Noheverina ho ilay atleta tsy tia populaire izay nandray ny Lalao Olaimpika tany Los Angeles tamin'ny orambe.
Araka ny filazan'i Leroy, "Ny gymnastique dia tsy karazana fanatanjahantena," hoy izy. "Saingy niresaka taminy mikasika izany aho ary fantatro fa tsara izy. Izy no fahatelo tamin'ny Lalao Olaimpika. Heveriko fa izy no voalohany avy tany Alemana mba handresy ny medaly bronze. Tena mirehareha amin'izany aho. "
Nanokana fitsangatsanganana be dia be i Regina mba hanampiana ny zanany lahy hipetraka mandritra ny fotoana voalohany niaraka tamin'ny City. Saripika mampiseho ny fandraisana anjarany amin'ny gymnastique dia aseho etsy ambany.
Leroy Sane Mama manao gymnastics
RAHALAHY: Leroy dia manana rahalahy roa izay nikarakara an'i Schalke 04. Ny rahalahiny zokiny, Kim, dia nanana fisedrana tamin'ny FC Koln.
Leroy Sane's big brother
Teraka tany Innsbruck any Aotrisy izy. Nanomboka ny asany amin'ny maha-mpiaro azy izy, tsy toy ny ambin'ireo zandriny tanora izay manana elatra.
Leroy Sane zana-drahalahy
Araka ny hitan'ny sary teo aloha, i Leroy dia manana rahalahy kely antsoina hoe Sidi izay izy no 8 taona efa zokiny. Sidi dia ao amin'ny Akademia Schalke amin'izao fotoana izao ary mamoaka lohateny toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Maro amin'ireo izay mahafantatra azy no mino fa ny talenta voajanahary dia lehibe kokoa noho ny an'i Leroy. Nolazain'ny haino aman-jery alemà indray fa nanantena i Sidi fa hiaraka amin'ny rahalahiny lehibe iray any Manchester indray androany. Amin'izao fotoana izao dia tsapany fa tokony hijanona any Alemaina izy.
Ny raim-pianakaviany dia nahatoky fa nanaraka ny dian'izy ireo ny zanany telo. Nanomboka nampiofana azy ireo tamin'ny sehatry ny fanabeazana tao Wattenscheid izy ireo tamin'ny fanesorana ny asany. Izany no nampiofana azy matetika tany am-piandohan'ny taona 90. Eny tokoa, i Souleymane Sane dia niteraka zaza mahafatifaty mahafinaritra sy indrindra indrindra. Manana firaiketam-po mahery vaika amin'ny vadiny izy mikasika ny endriky ny lokon'ny taranany.
Ny fianakavian'i Leroy Sane amin'ny lehilahy
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Relationship Life
tahaka Danny Drinkwater, Ousmane Dembele, Henrikh Mkhitaryan, ary ny vady aman-janany Gabriel Jesus, Ny fifandraisan'i Leroy Sane dia tsy fantatra ankehitriny. Ary koa, tsy nisy ny tatitra momba ny fifandraisan'ny fifandraisan-davitra toy ny amin'ny raharaha Edinson Cavani ary Antony Martial.
Ny sipany an'i Leroy Sane dia tokony ho tena mahazo aina amin'ny lehilahy, na dia ianao aza manapa-kevitra ny hanao ny satan'ny fifandraisany mangina sy manohitra ny mason'ny haino aman-jery. Ny ray aman-dreniny dia tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny fitarihana momba izany. Na izany aza, manantena ny hanao fanambarana madio izy ary hanaraka ny dian-tongotra Roberto Firmino, Marcus Rashford ary Alex Oxlade-Chamberlain.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Favorite Meal
Nilaza izy fa ny karazan-tsakafo tiany indrindra dia carbonara carbonara. Ary toy ny andro mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​i Sane dia manondraka ny sira. Ny safidin'ny sakafo maraina ho an'ny Alemana dia ny Loze Fruit-All American.
Mihinana sy mandeha izy amin'ny fotoana iray. Eto ny kintan'ny alemana dia mandeha mankany amin'ny balcony tsy manam-pahaizana izay manana dobo filomanosana.
Rehefa avy nisakafo i Sane, dia maka fotoana kely hisedra.
Notanterahina tamin'ny fanaovana asa ratsy teo amin'ny tratra nify.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Tantara miaraka amin'i Mesut Ozil
Leroy Sane sy Mesut Ozil dia nitombo tany amin'ny tanàna niaviany tany Alemana ary samy nanatrika ny tanora Youth FC FC Schalke 04.
Hianao Ozil dia efa mihoatra ny 5 taona mihoatra an'i Leroy. Raha ny momba ny traikefan 'ny fahazazana, dia aleo kokoa i Leroy noho ny Ozil Ny ray aman-dreniny dia tena mahantra.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Ny Idol
Nanampy koa izy fa nihalehibe an'i Robert mpanohana, niaraka tamin'i Ronaldinho sy i Lionel Messi ny modely nomeny.
Na izany aza dia hitany i Pep ho mpanoro hevitra azy. Nibaribary be i Leroy Sane nandritra ny fitenenany tany Alemaina.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Style of Play
Izany no mampiavaka azy. Izy dia manokana noho ny teknika, ny fandanjalanjana, ny fitifirana ary ny hafainganam-pandehany. Ankoatra izany, ny ampahany amin'ny fandefasan'i Sane dia ny fahaizany 'Nutmeg' ireo mpanohitra azy - mandondòna amin'ny tongony.
Araka ny nolazainy- "Efa ela aho no nanao izany. Fony aho mbola kely, isaky ny nihira aho raha azoko natao ny nieritreritra, dia hanao izany aho. Tsy hoe satria te hamporisika ilay mpilalao hafa aho. Ao an-dohako dia fomba iray handehanana mpiaro iray izany ary izany no antony anaovako izany. "
Rehefa ampitahaina amin'ny mpilalao iray hafa izay nanatri-maso ny lazany toy izany, dia ny tanora Ryan Giggs dia ho fampitahana tsara. Afaka mandeha milalao eny rehetra eny i Giggs, mihetsika foana izy. Leroy dia efa tranainy kokoa, toa an'i Giggs hatrany am-piandohana. Eo amin'ny elany i Leroy ary mijanona eo amin'ny elatra izy, tiany ny mizana amin'ny kirany.
'Azony atao koa ny milalao ao ambadik'ireo mpikatroka. Zava-dehibe ny taona. Raha te-hilalao ao Manchester City ianao amin'ny vanim-potoany, amin'ny ankapobeny dia ny fomba tsara indrindra hiditra ao dia mety hilalao amin'ny ambaratonga voalohany. Rehefa afaka kelikely, dia hilalao any aoriana izy. Mora haingana izy ka tsy afaka manakana azy. '
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Fitiavana am-bohoka
Leroy nizara ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany niaraka tamin'ny mpilalao baolina kitra Emile Heskey, Jamie Vardy ary mpihira Mary J Blige.
Leroy Sane Birthday Mates - Maro, Vardy ary Heskey
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: Ilay mpilalao baolina kitra malaza indrindra
Leroy Sane dia nalaza ho mpilalao baolina kitra malaza indrindra eran-tany. Ny fampitana azy ho any Man City no tena manan-danja. Ny Manchester City dia nandoa an'i Schalke tamin'ny voalohany £ 37million fa ny fifanarahana dia niakatra ho £ 42m taorian'ny nahitana saram-pampana fanampiny.
Leroy Sane - mpilalao baolina kitra malaza alemà tamin'ny androny
Izany ihany koa no mahatonga azy ho Sane no fividianana lafo indrindra amin'ny fahavaratra voalohany nataon'i Pep Guardiola tamin'ny baolina anglisy. Ny fifandraisany dia manafoana ny tarehimarika nokaramaina ho an'ny mpandresy tamin'ny mondialy Mesut Ozil, Mats Hummels, Mario Gotze ary Manuel Neuer.
Leroy Sane Childhood Story Plus Untold Tatitra: FIFA Facts
Ity manaraka ity dia ny zava-misy FIFA 17 azo avy aminy FutHead. Leroy Sane FIFA 18 zava-misy tsy misy fisalasalana dia iray izay azo antoka fa hampiseho ny fivoaran'ny mpilalao baolina vao haingana.
Fijerin'ny FIFA an'i Leroy Sane
Kyle Walker Tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra